စစ်အာဏာရှင်လက်ပါးစေများထံသို့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထော… – PVTV Myanmar
စစ်အာဏာရှင်လက်ပါးစေများထံသို့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထော…
စစ်အာဏာရှင်လက်ပါးစေများထံသို့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုး၏ သတိပေးပြောကြားချက်
Like – 13K Share – 3476
2021-04-30 at 6:10 PM
Shwe Htay says:
2021-04-30 at 6:13 PM
Ahkar Naung says:
2021-04-30 at 6:21 PM
ဆရာကြီး ကျန်းမာပါ​စေ ဆရာကြီးအသံကို ကြားရတာကိုက အားတက်တယ် အားရတယ် …..အ​ရေး​တော်ပုံ ​အောင်ရမည်
Zarny Myn Htet says:
2021-04-30 at 6:41 PM
ဆရာ ေဇာ္ေဝစိုးဟာ သိပ္ အရည္ အခ်င္းျပည့္ တယ္။ ဒီလို ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြ ရလိုက္တာ တို့အတြက္ ရလဒ္ေကာင္းပဲ။
Khun Aung Hlaing Moe says:
2021-04-30 at 6:42 PM
စကားေျပာျပတ္တယ္ ခုလိုေျပာတာမအလအဖြဲ႔ေၾကာက္ေနေလာက္ပီ ဒါေတာင္ေသနက္မပါေသးဘူး
2021-04-30 at 7:00 PM
ဓမ္မနဲ့ အဓမ္မ သိတာလည်းဖြစ်နိုင်သလို သိရဲ့သားနဲ့ ​တွေ​ဝေ​နေတာမျိုး မပြတ်သားမစွန့်လွှတ်နိုင်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်သလို အဓမ္မကိုသာစွဲလန်းခုံမင်​နေကြတာလည်းဖြစ်နိုင် ဘယ်လိုအ​ခြေ​နေမှာဖြစ်ဖြစ် အများ​ကောင်းကျိုးစိတ်​စေတနာအမှန်နဲ့ ကိုယ့်အမျိုးသားချင်း​တွေအ​ပေါ် သစ္စာ​စောင့်သိ အားကိုးထိုက်သူများဖြစ်နိုင်ကြပါ​စေ လူလူခြင်း နှိပ်စက်ခြင်း ကင်း​ဝေးကြပါ​စေ🙏🙏🙏
Wendy Tumar Su says:
2021-04-30 at 7:03 PM
အ ေရး ေတာ္ ပံု ေအာင္ ရ မည္
2021-04-30 at 7:05 PM
ဆရာကြီးရှင့် CDM မှ Non CDM သို့ ပြောင်းသွားတဲ့ သူ တွေ မှတ်ထားပြီး အရေးယူပေးပါ။
2021-04-30 at 7:09 PM
ရန်ကုန် – မန္တလေး အမြန်လမ်း
173 မိုင် တောင်ငူ အနီး စစ်ခွေးတွေက KNU ဝင်တယ်ယူစပြီး ရွာတွေကို ဝင်ပစ်နေပါတယ်၊ လေယဥ်နဲ့ပစ်နေပါတယ်။ အမြန်လမ်းပေါ် ကားတွေသွားမရလို့ ပြန်လှည့်လာတဲ့ ကားသမားတွေစီက သတင်းပါ။
Speak Out လုပ်ပေးကြပါ
2021-04-30 at 7:25 PM
စစ်အာဏာရှင်ကိုကြောက်တဲ့ Gen Lee တွေ၊ ဒလန်တွေ ပြည်သူက ဒဏ်ခတ်နေပြီ၊ ကြည့်ရှောင်တော့၊ တဖြေးဖြေး ခင်ဗျားတို့အလှည့်ရောက်လာပြီ
Ko Htwe says:
2021-04-30 at 7:34 PM
Ar yae taw puံ Aung ya me
2021-04-30 at 7:36 PM
ဆရာေရ…စစ္ေရးအရပါ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရင္ ပိုေကာင္းမယ္ထင္တယ္ဗ်ာ
နု နု ေမာ္ says:
2021-04-30 at 7:38 PM
ဆရာရှင့် CDM ဝင်တယ်လုပ်ပီး စစ်ကောင်စီမှာအလုပ်ပြန်ဆင်းနေတဲ့သူတွေကို ထိရောက်စွာအရေးယူပေးပါရှင့် နှစ်ဖက်ခွပီး နေနေတဲ့သူတွေ သာကူးတွေ ရှိနေပါတယ်ရှင့် ပြတ်ပြတ်သားသား အရေးယူပေးပါ တကယ့်CDM သမားတွေကိုပဲ နေရာပေးပါ
2021-04-30 at 9:48 PM
Asen don’t hv bitterly ashamed of
their5consensus.Asean don’t hv bitterly ashamed of
their5consensus
2021-04-30 at 10:34 PM
ဆရာ သူတို႔ကိုသြားေျပာလဲ ႏြားကို ပလာတာေကြၽးသလိုဘဲ လူငယ္ေတြထက္ လူႀကီးေတြကပိုစီုးေနတယ္ လူေတြက. ေသခံနီးေနက်ပီး ေစာက္အာဏၰာက ႐ူးေနၾကတာ သြားမေျပာေနနဲ႔ေတာ့
​ရွေးချယ်မှုမှန်မှ ဆုံးဖြတ်ချက် မှန်ပါလိမ့်မယ်။
ကုသိုလ် အကုသိုလ် ခွဲနိုင်ရင်ကို အမှန်​တွေ့ပါလိမ့်မယ်။
Okkar Kyaw says:
2021-05-01 at 7:43 AM
တိုင္း ျပည္နယ္ အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာ အရာ႐ွိေတြက
ေအာက္ေျခ ဝန္ထမ္းေတြကို ဖိအားေပး ၿခိမ္းေျခာက္ေနတယ္လို႔ ဝန္ထမ္းမိသားစု ေတြထံက ၾကားသိရပါတယ္
Paing Ye Kyaw says:
2021-05-01 at 8:19 AM
Hay Mon Thet says:
2021-05-01 at 9:43 AM
Munna Bhai Khrel says:
2021-05-01 at 9:56 AM
ဓမၼသည္သာ ထာဝရ‌ေအာင္ပြဲ ျဖစ္သည္။
အဓမၼသမား စစ္အာဏာရူး စည္းစိမ္ရူးမ်ား
∆*အေရး‌ေတာ္ပံု မုခ် ‌ေအာင္ရမည္*∆
ထိပ်ထား ေလး says:
2021-05-01 at 12:02 PM
သံေယာဇဥ္ႀကီးတဲ့ ဒံုဝန္းသားေလး says:
လေးစားပါတယ် ဒေါက်တာ ဇော်ဝေစိုး အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည် အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည် အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည်
Yin Yin Mon says:
2021-05-01 at 12:55 PM
2021-05-01 at 1:37 PM
Myint Myat Zaw says:
2021-05-01 at 3:35 PM
2021-05-01 at 4:19 PM
Aunty Kyaing says:
2021-05-02 at 2:31 AM
2021-05-02 at 10:08 AM
အော် နည်းနည်းပါးပါး ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်လေးနဲ့တောင် Video လေးရိုက်ပြီး ပြောပါလား ဗျာ။မသေပါဘူး ဟ။လူငယ်တွေတောင် လမ်းပေါ်တက် ပြီး ပြောဆိုသွားလာနေကြတာ။ခင်ဗျားတို့ဆိုသည်မှာလည်း ကိုယ့်ကြည့်တော့လည်း အောက် မှာ မလှုပ်နိုင်မကိုင်နိုင် ဒါကို အပေါ်ကလူက တစ်ချက်ထုလိုက်တိုင်း အထုခံရတဲ့အောက်ကနေပြီး မှတ်ပြီလား ပြန်ပြန်မေးနေသလိုဖြစ်နေတာလည်း သတိထားပါဦး ဟာသတွေ ထထမလုပ်ပါနဲ့ ဟ
Ba Din says:
2021-05-02 at 1:20 PM
2021-05-02 at 5:36 PM
2021-05-02 at 6:12 PM
သတိပေး‌နေတာကိုအရေးမစိုက် ကိုယ်ကျိုးအတွက်ပဲ ကြည့်နေကျတဲ့
အကြမ်းဖက်အုပ်စုရဲ့လက်ပါးစေ YGHဆေးရုံ က ဆေးရုံအုပ်တွေ CDMလုပ်နေတဲ့ဝန်ထမ်းရဲ့
နေရာလိပ်စာဓါတ်ပုံ‌အတိကျ အကြမ်းဖက် စစ်အုပ်စုကိုပေးပြီဖမ်းခိုင်ပါတယ် ဆရာ အချိန်မှီရှောင်နိုင်ခဲ့ကျလို ညကအဖမ််းမခံ လိုက်ရဘူး။
YGHကဆေးရုံအုပ် ၃ ယောက်
2021-05-03 at 6:35 AM
Kate Batt says:
2021-05-03 at 9:29 PM
Listen how powerful voice he had ,this is the authentic voice of leadership…our country do need authenticity….
ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း – သီချင်း…
A Brave Boy : Pauk Si (April 30/2021)